ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स एजीएम : ६६ करोड बराबरको साधारण शेयर जारी गर्ने – News Dainik
ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स एजीएम : ६६ करोड बराबरको साधारण शेयर जारी गर्ने
News desk १३ आश्विन २०७६, सोमबार ०७:११ बीमा प्रतिकृया दिनुहॊस
काठमाडौं । यस ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको दोश्रो वार्षिक साधारणसभा २०७६ आश्विन १२ गते सम्पन्न भएको छ । साधारणसभाले संचालक समितिको प्रतिवेदन, आ.व. ०७४/७५ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, नाफा नोक्शान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण पारित गर्दै आ.व. ०७५/७६ को लागि लेखापरिक्षक नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको कुल जारी पुँजीको ३० प्रतिशतले हुने रु. ६६ करोड बराबरको साधारण शेयर जारी गर्ने विशेष प्रस्ताव सहित सम्पुर्ण प्रस्तावहरु सर्वसम्मतीले पारित गरेको जानकारी गराएको छ । कम्पनीले रु.१.४१ अर्ब कुल बिमा शुल्क आर्जन गरी रु.२.४० अर्ब जस मध्ये ८५ प्रतिशत उच्च प्रतिफलमुलक निक्षेपमा दिर्घकालिन लगानी गर्न सफल भएको छ ।
अघिल्लॊ महान चाड बडादशैंको दोस्रो दिन आज, ब्रह्मचारिणीको पूजा गरिंदै
पछिल्लॊ इभेष्टमेन्ट बैंकले सुरु गर्यो पेमेन्ट गेटवे सेवा